လက်ဖွဲ့တွက်နည်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » လက်ဖွဲ့တွက်နည်း
Posted by Ma Ma on Oct 21, 2011 in Community & Society, Creative Writing | 32 comments
လက္ဖြဲ႔တြက္နည္း ေရးမိေရးရာ လက္စမ္းစာေပ
ရွာသူားတွေကို ဖြန့်ဝေဖို့ ခါတော်မီ အိုင်ဒီယာလေးတစ်ခု ခေါင်းထဲရောက်လာတယ်။
သီတင်းကျွတ်ပြီဆိုတာနဲ့ ပလူပျံလာတဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာတွေကိုကြည့်ပြီး ဘယ်သူ့သားလဲ၊ ဘယ်သူ့သမီးလဲ၊ ကိုယ်နဲ့ ဘယ်လိုဆက်နွယ်နေသလဲ ဆိုတာတွေ ဦးဏှောက်ထဲထည့် ဖော်မြူလာထုတ်ပြီး လက်ဖွဲ့ဖို့ တွက်ချက်ရတာလေးကို မျှဝေချင်ပါတယ်။
ဖိတ်စာတစ်စောင်ရောက်လာပြီဆိုရင် မင်္ဂလာဆောင်သွားဖို့ မသွားဖို့ (သွားနိုင် မသွားနိုင်) ဆိုတာနဲ့အတူ ဘယ်လောက်လက်ဖွဲ့ရမလဲဆိုတာကို တခါတည်း တွဲပြီးစဉ်းစားရတော့တာပဲ။
အဲဒီမှာ ဘယ်လောက်လက်ဖွဲ့မလဲ ဆိုတာက အဓိက ပြဿနာကြီးပေ့ါ။
ဒီခေတ်ကြီးရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်တွေက သိတော်မူကြတဲ့အတိုင်းမို့လို့ နည်းမှာကို စိုးရိမ်ရတဲ့အပြင်၊ လူမှုရေး စီးပွားရေး ဆက်စပ်နေသူများဆိုရင်တော့ ပိုလို့သာ သတိထားရတော့တာပေ့ါ။
ဆွေတွေမျိုးတွေဆိုရင် ကိုယ့်အသိုင်းအဝိုင်းထဲကမို့ ဘယ်သူက ဘာပစ္စည်း လက်ဖွဲ့မယ် စသဖြင့် လိုအပ်ရာရာလေးတွေကို တစ်ယောက်တစ်မျိုး ဝိုင်းဝန်းဖြည့်ဆည်းပေးကြတာမို့ တကယ့်ကို ပျော်ဖို့တောင် ကောင်းသေးတယ်။
ဒါ့အပြင် သတို့သားလောင်း သတို့သမီးလောင်းလေးတွေကို မိဘဆွေမျိုးတွေက ဘယ်သူကဖြင့် ဘယ်လိုလိမ္မာတယ် (ကိုယ်ချစ်ရင် ချစ်သလို)၊ ဘယ်သူကဖြင့် စာတော်တယ်၊ ဘယ်သူကဖြင့် ချို့တဲ့ရှာတယ်၊ လိုအပ်ရှာတယ်ဆိုပြီး ပေါင်းလဒ်တွေ အထပ်ထပ်ထည့်လို့ လက်ဖွဲ့ရတာပေ့ါ။
အထူးသဖြင့် စီးပွားရေးနဲ့ ဆက်စပ်နေသူတွေဆိုရင်တော့ (ဈေးတွက်လို့ပဲ ခပ်ကြမ်းကြမ်း နာမည်ပေးလိုက်တော့မယ်) သူ့အတွက်လည်း အဆင်ပြေ၊ ကိုယ်အတွက်လည်း သက်သက်သာသာဖြစ်စေမှာမျိုး၊ ကိုယ်နဲ့အပြိုင် စီးပွားတူတွေကရော သူတို့ကို ဘယ်လောက်လက်ဖွဲ့လိုက်မလဲ ဆိုတာတွေကိုပါ ပုံသေနည်းချလို့ တွက်ချက်ရတော့တာပဲ။
ဟိုးးးးးး အရင်ကတော့ မိဘတွေလက်ထက်က အဖေက မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာတစ်စောင်ရောက်လာရင် သူ့ဖာသာသူ ကြည့်ပြီး တွက်ချက်လက်ဖွဲ့လိုက်တာ အဆင်ကိုပြေလို့။ ဘာ complaint မှ ပြန်မလာပဲ လူမှုရေး စီးပွားရေး အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာလည်း ဆက်ဆံရေး ပြေပြေပြစ်ပြစ် ရှိတယ်။
ကိုယ့်အလှည့်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ ဖိတ်စာတစ်စောင်ရောက်တိုင်း တစ်ခါခေါင်းခဲရတယ်။
အခုဒီနေရာမှာ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် တီထွင်ထားတဲ့ လက်ဖွဲ့တွက်နည်းကို မချွင်းမချန် (ဆရာစားမချန်ပဲ) ပေးပါတော့မယ်။
မင်္ဂလာဆောာင်တစ်ခုကို လက်ဖွဲ့တော့မယ်ဆိုရင် မင်္ဂလာမောင်မယ်ကို သူတို့ရဲ့ အိမ်ယာထူထောာင်မှုမှာ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် အားဖြည့်ပေးတဲ့သဘောလို့ ယူဆလို့ အနည်းဆုံး သူတို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲကုန်ကျစရိတ်ထက် မလျော့ရဘူးလို့ ကြမ်းခင်းဈေး သတ်မှတ်လိုက်တယ်။
အဲဒီကြမ်းခင်းဈေးက မင်္ဂလာဖိတ်စာက ဘယ်လောက်ကျမလဲ၊ အခမ်းအနားနေရာက ဘယ်မှာလဲ၊ ဖိတ်စာမှာ တစ်ယောက်တည်းကို ဖိတ်တာလား၊ မိသားစုကိုပါ ဖိတ်တာလား၊ ဘယ်အချိန်လုပ်တာလဲ၊ ဘာကျွေးမှာလဲ ဆိုတာတွေနဲ့ တွက်ချက်တယ်။
ဥပမာ- စီဒိုးနားဆိုပါတော့ လက်ဖက်ရည်ပွဲဆိုရင် ဧည့်သည်တစ်ယောက်ကို ၁ဝ ဒေါ်လာလောက်ကျမယ်။ ညစာစားပွဲဆိုရင် တစ်ယောက်ကို ၂၅ ဒေါ်လာလောက်ကျမယ်။ ဘယ်နှစ်ယောက်ကို ဖိတ်တာလဲ။ နှစ်ယောက်သွားရင် ကုန်ကျစရိတ်ကို ၂နဲ့ မြှောက်ပေ့ါ။
ဖိတ်စာဖိုးနဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ကို ပေါင်းရင် ကြမ်းခင်းဈေးရပြီ။
အဲဒီကြမ်းခင်းဈေးကိုမှ ထပ်ဖြည့်ပေါင်းလဒ်က ပိုပြီး အရေးကြီးတယ်ထင်ပါတယ်။
ထပ်ဖြည့်ပေါင်းလဒ်ကို တွက်ချက်ဖို့ကျတော့ ကိုယ့်နဲ့ ဘယ်လိုဆက်နွယ်နေသလဲ ဆိုတာကို စဉ်းစားရမယ်။ ဆက်နွယ်မှုကို မူတည်ပြီး ပေါင်းလဒ်အနည်းအများ ကွာခြားသွားတာပေါ့။ စီးပွားရေးနဲ့ ဆက်စပ်နေသူဆိုရင် ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိ ကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာ အကျိုးပြုသလဲ။ သူ့ရဲ့ ကိုယ့်လုပ်ငန်းအပေါ် အားပေးတဲ့သဘောထားက ဘယ်လိုရှိသလဲ။
ဥပမာ- သူနဲ့ကိုယ် လုပ်ငန်းချင်းဆက်စပ်တာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။ သူ့ရဲ့ ဝယ်ယူ/ရောင်းချ အားပေးမှုက ကိုယ့်ဆီမှာပဲ အဓိက ရောင်းဝယ်နေတာလား။ လုပ်ငန်းတူတွေနဲ့အတူ မျှပြီး ဝယ်ယူ/ရောင်းချအားပေးနေတာလား။ ဝယ်ယူ/ရောင်းချတဲ့အခါမှာ သူကကိုယ့်အပေါ်၊ ကိုယ်ကသူ့အပေါ် ယုံကြည်စိတ်ချမှု အနေအထားက ဘယ်လိုရှိလဲ ဆိုတာတွေကိုတော့ နောက်တိုးပေါင်းလဒ်အနေနဲ့ ထပ်ပေါင်းရတာပေ့ါ။
ကဲ…. ဒီလောက်ဆိုရင် ကိုယ့်ရွာသူားတွေလည်း လက်ဖွဲ့ဖို့ကို သင့်တင့်မျှတအောင် တွက်ချက်နိုင်ကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
(အချွန်နဲ့ `မ´ တယ်လို့တော့ မထင်နဲ့နော်။ အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင် ခုရက်ထဲမှာ ဖိတ်စာတစ်စောင်ရောက်လာပြီး တွက်ချက်လက်ဖွဲ့လိုက်တာ ကိုယ်နဲ့လုပ်ငန်းတူတစ်ယောက်က လက်ဖွဲ့လိုက်တာနဲ့ အများကြီး နည်းသွားလို့ ကာယကံရှင်က ဖုံးဆက်ပြီး complaint လာလို့ ဖီးလ်ကွေးပြီး ရေးလိုက်တာ။)
မမ ကတော ့ဦးစားပြီ ( အုန်းစားပြီ )
မောင်ပေ ကတော့ စီးပွားတူ တဲ့ မိတ်ဆွေ ဆိုရင် တစ်သောင်းကျပ် ကနေ သုံးသောင်းကျပ် ။
ကိုယ့်စီးပွားရေးကို အားပေးတဲ့ကပ်စတမ်မာ ဆိုရင်တော့ ၊သူအားပေးခဲ့မှုအပေါ်မူတည်ပြီး နှစ်သောင်းကျပ်ကနေ တစ်သိန်းကျပ် ။
ခင်မင်တဲ့သူငယ်ချင်း ဆိုရင်တော့ ၊ ခင်မင်မှု အပေါ်မူတည်ပြီး..
အနည်းဆုံး နှစ်သောင်းကျပ် ကနေ တစ်သိန်းအထိ ဖွဲ ့ခဲ့တာပါပဲ ။
အဲ..ကိုယ့်ရဲ ့လုပ်သက်မြင့် ဝန်ထမ်း တစ်ယောက် မင်္ဂလာဆောင်ဆိုရင်တော့ တစ်သိန်းအောက်ထစ် ဖွဲ့ရတာပေါ့ ။
သိပ်မသိတဲ့ ၊ မျက်နှာတန်းရုံလောက်ဆိုရင်တော့ ၅ထောင်လောက်ပဲ ဖွဲ ့တယ် ဗျို ့
ကိုပေ ရေ ကျွန်တော်ဖိတ်စာပို့လိုက်မယ်ဗျ
ကိုပေ တစ်ယောက်နဲ့ တင် ခိုင်လောက်တယ်
ခင်လဲခင်တယ် ကိုပေ စာတွေလဲ အားပေးနေတဲ့ ကာစတမ်မာ ပါခင်ဗျ
မင်္ဂလာဆောင်ရင်တော့ မောင်ပေ့ကို ဦးစားပေး ဖိတ်ဦးမှ..
ဒီပုံတိုင်ဆို..မမကတော့ ရှော ့ရှိတယ်..ဟီးဟီး..
အပြန်အလှန်ပေါ့ မစ်စတာပေါက်ဖော် ရယ်
မောင်ပေါက်နဲ့ မောင်ပေတို့ရဲ့ တွက်နည်းက ကျမတွက်နည်းထက်သာသွားပြီ။
MaMa ရေ… မောင်ပေါက်ဆိုလို့ .. ကိုပေါက်က သူ့ကိုပြောတာလားဆိုပြီး ဇဝေဇဝါဖြစ်သွားဦးမယ် … လေးပေါက်ကြီး မိန်းမရတာ လောင်းလောင်း အဂိုးကတည်းက ဟီး
အားပါး။ အဲလောက်တောင် တွက်ရချက်ရမှန်း ကျွန်တော် တကယ်မသိဘူးဗျ။
ကျွန်တော် ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က ဆီဒိုးနား မှာ လုပ်တဲ့
မင်္ဂလာဆောင် တစ်ခုကို မဖြစ်လို့ တက်ရတယ်။ သိတ်ရင်းနှီးလှတယ်တော့မဟုတ်ဘူး။
ဒါနဲ့ လက်ဖွဲ့ က နှစ်သောင်းခွဲလောက်တန်တဲ့
ထမင်းပေါင်းအိုးကို ဆိုင်မှာပဲပါကင်လှလှ ထုတ်ခိုင်းပြီး
လင်မယားနှစ်ယောက် ချီတက် ခဲ့ကြပါတယ်ဗျာ။
မမ ပြောသလိုဆို သူတို့ ကျွန်တော်တို့ကို ဖိတ်တာ ရှုံးတာပေါ့ နော။
ခုမှ အားနာလိုက်တာဗျာ။ ဟားဟား။
MaMa တို့က ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးနဲ့ လွတ်လွတ်ကင်းကင်း တင်းတင်းရင်းရင်းနေနိုင်သူတွေမို့ သင့်တော်တဲ့တွက်နည်းနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွက်ပြီးလက်ဖွဲ့နိုင်ပေတာပေါ့….။
အစိုးရဝန်ထမ်းသာဆိုရင် အထူးသဖြင့် အထက်မကျ အောက်မကျဝန်ထမ်းမျိုးဆိုရင် ကိုယ့်အထက်လူကြီးနဲ့ဆိုင်ရာကို လက်ဖွဲ့ရရင် တော်တော်ခေါင်းစားတယ်။
ဘယ်သူ့ထက်တော့ မနည်းမှကောင်းမှာ မဟုတ်ရင်အလကားနေရင်း ငြိုငြင်ခံနေရမှာတို့….
ဘယ်သူ့ထက်တော့မများမှဖြစ်မယ် မဟုတ်ရင် အမျက်တော်ရှမှာတို့ နဲ့ ………
လက်ဖွဲ့မတတ်လို့ ခြေလျှင်ကမထွက်နိုင်တဲ့ အရာရှိတွေသာကြည့်တော့..။
blackchaw ရေ- တွက်ချက်ပြီး လက်ဖွဲ့တာတောင် `စိတ်ထဲတော့ ဘယ်လိုမှ မထားပါနဲ့ သူများတွေ လက်ဖွဲ့တာထက် နည်းလို့´ ဆိုပြီး ကာယကံရှင်က ပြောလာတော့ စိတ်ထဲဘယ်လို ဖြစ်သွားမှန်းမသိဘူး။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပဲ ဒေါသထွက်ရမလား၊ သူ့ကိုပဲ စိတ်ဆိုးရမလား မသိဘူး ဖြစ်သွားတယ်။
ဦးပါလေရာရေ- အဲဒီလိုသာဆိုရင် တခေါင်းလုံးတောင် ဖြူလောက်တယ်။ ခုတောင်လက်လည်း ဖွဲ့ရသေး၊ အပြောလည်း ခံရသေးဆိုသလို ဖြစ်နေလို့ ဖီးလ်ကွေးနေတာ။ လက်ဖွဲ့တာလည်း ဆေးရောင်စုံ သီတင်းကျွတ်ကန်တော့သလို ဖြစ်နေတယ်။
လောကကြီးမှာ အဲဒီလိုတွက်ချက်မှုတွေရှိတယ် မောင်တိုက်ဂါးရေ။ ဒါတောင် ကိုယ်မသိသေးတာတွေ (ဦးပါလေရာပြောသလိုမျိုး) အများကြီးရှိသေးတယ်။
MaMa ရေးတာဖတ်ရတော့ ကျွန်တော့ဦးလေးတယောက် လုပ်တာလေး သတိရတယ်။
သူက သူ့ကိုကူညီထားတာ၊ လက်ဆောင်ပေးထားတာ ၊ လက်ဖွဲ့ထားတာတွေကို စာအုပ်ကြီးတအုပ်နဲ့ မှတ်ထားတယ်။ ဘယ်လောက်ကြာပြီမှန်းတော့မသိဘူး- စာရွက်တွေတောင် ဝါကြင်ကြင်ဖြစ်နေပြီ။
အဲဒါ သူလက်ဖွဲ့စရာ လက်ဆောင်ပေးစရာရှိရင် အဲဒီစာအုပ်ကြီးလှန်ပြီး refer လုပ်တော့တာပဲ။
ငယ်ငယ်ကတော့ ဒီလူကြီး ဈေးတွက်တွက်လွန်းတယ် လို့ ထင်မိတယ်။
ဒါပေမယ့် သူ့တသက်လုံး လူမှု့ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုအမှားအယွင်း အဖုအထစ်မှ မတွေ့ရတာကို စဉ်းစားကြည့်တော့ သူ့ဟာက ဟုတ်သလိုလိုပဲ။
တချို့ တိကျသေချာတဲ့လူတွေ လုပ်လေ့လုပ်ထရှိတတ်တဲ့ လုပ်နည်းပါပဲ xman ရေ။ အဲဒီလို ဂရုတစိုက် လုပ်နိုင်ရင်လည်း ကောင်းတာပဲ။ ကိုယ်ကတော့ အဲဒီလောက်လည်း တိကျသေချာတဲ့လူ မဟုတ်တော့ အမှားမှား အယွင်းယွင်းတွေ ဖြစ်ကုန်တော့တာပေ့ါ။
– မြန်မာပြည်က.. စတိုးဆိုင်တွေမှာ.. လက်ဖွဲ့စေချင်တာကို.. မင်္ဂလာမောင်မယ်က.. ကြိုပြီး.. ဘွတ်ကင်လုပ်ခိုင်းထားတာမျိုး စံနစ်ရှိသလားလို့…။
လက်ဆောင်ပေးမဲ့သူက.. အဲဒီသွားမေးပြီး.. ငွေပေးယုံပေါ့..။
– နောက်တခုက.. ပစ္စည်းလက်ဖွဲ့တော့ ထပ်နေမှာ တူနေမှာတွေဖြစ်မျာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းသလည်းလို့..။
ဥပမာ.. ကိုရင်ဘလက်ချောပေးသလို.. တယောက်လည်း ထမင်းပေါင်းအိုး.. နောက်တယောက်လည်း ထမင်းပေါင်းအိုးဖြစ်နေရင်.. အိမ်ထောင်တခု.. ထမင်းပေါင်းအိုး၂ခု.. ဘယ်လိုလုပ်ကြမလည်း စဉ်းစားသလားလို့..။
– ငွေကြေး(ကက်ရှ်)ပဲ.. လက်ဖွဲ့တဲ့အလေ့အကျင့်မျိုး..တွင်ကျယ်သလား..
စသဖြင့် သိချင်ပါတယ်..။ သိသူတွေ.. ဖြေသွားပေးပါဥင်္ီးနော…။
လက်ဖွဲ့စေချင်တာကို.. မင်္ဂလာမောင်မယ်က.. ကြိုပြီး.. ဘွတ်ကင်လုပ်ခိုင်းထားတဲ့စံနစ်မျိုး ရှိတော့ရှိတယ်။ ရှားတယ်။ မတွင်ကျယ်သေးဘူး။
တခါကတော့ သူတို့အတွက် လက်ဖွဲ့ကို စီတီးမတ်ဆိုင်ခွဲတစ်ခုကို ညွှန်ပေးပြီး လက်ဖွဲ့နိုင်ကြောင်း မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာမှာ ထည့်ရိုက်ထားတာ တွေ့ဖူးတယ်။ အဲဒီဆိုင်ခွဲသွားရင် မင်္ဂလာမောင်မယ်က offer လုပ်ထားတဲ့ တန်ဖိုးအစုံနဲ့ ပစ္စည်းတွေထဲက ကိုယ်မှန်းထားတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပစ္စည်းကို ရွေးလိုက်ရုံပဲ။
နောက်တမျိုးက လက်ဖွဲ့ချင်တဲ့လူက gift cheque ဆိုတာကို စီတီးမတ် (သို့) ဘဏ် က ဝယ်ပြီး လက်ဖွဲ့လိုက်ရင် မင်္ဂလာမောင်မယ်က အဲဒီတန်ဖိုးနဲ့ ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းကို ရွေးယူတဲ့စနစ်လည်း ကောင်းတယ်။
ပစ္စည်းတွေ ထပ်တူနေတာမျိုး၊ အသုံးမတည့်တာမျိုးတွေလည်း အများကြီး ကြုံရတာပေ့ါ။ အဲဒါကို ရှင်းနည်းက အမျိုးမျိုးပဲ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်တုန်းကတော့ တိုင်ကပ်နာရီချည်းပဲ အလုံး၃ဝကျော်ရလို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ၊ စာသင်ကျောင်းတွေမှာ လိုက်လှူလိုက်တယ်။ အသိတစ်ယောက်ကတော့ အသုံးမတည့်တာ ပိုနေတာတွေကို မိတ်ဆွေတွေကို လျှော့ဈေးနဲ့ ရောင်းပေးလိုက်တယ်။
ငွေသားလက်ဖွဲ့ရမှာ အားနာစရာလို့ထင်နေပေမယ့် နောက်ဆုံးတော့လည်း ငွေသားကသာ မင်္ဂလာမောင်မယ်အတွက် ပိုအဆင်ပြေသလိုပဲ။
ဒီနိုင်ငံမှာလည်း … ရှိတော့ရှိလာပါပြီ သဂျီးရေ .. သို့သော် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးမပြုသေးပါဘူး … ။ gift ဘောက်ချာလိုမျိုးတော့တွေ့ဖူးတယ် … ။
တစ်ချို့တွေဆို … ပစ္စည်းထက် ပိုက်ဆံပိုကြိုက်တယ်လေ … ။ ပစ္စည်းတွေများနေ ၊ တူနေလျှင်တောင် ဆွေမျိုးတွေကိုပြန်ရောင်းတာမျိုး ..သူများမင်္ဂလာဆောင်လျှင် ပြန်လက်ဖွဲ့တာမျိုး … လုပ်တတ်ကြပါတယ် … ။
ကပ်သီးကပ်သတ်အတွေးနဲ့ ကျွန်မကတော့ မင်္ဂလာဆောင်တယ်ဆိုတာ … လူသိများလေ … ရှက်ဖို့ကောင်းလေလို့ …တွေးမိတယ် … (ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး) … လူအများကြီးထဲ တရားဝင်ကာမဆက်ဆံခွင့်ရပြီလို့ ကြေငြာလိုက်သလိုပဲ … ။ နောက်ပြီး … အခုနောက်ပိုင်း မင်္ဂလာဆောင်တွေကလေ …. လူတွေကို တကယ်စေတနာရှိလို့ အသိပေး ကျွေးမွေးချင်တာထက် …. ဂုဏ်ကျော်ကြားမှူနဲ့ …. ဈေးတွက်တွက်ပြီး ဘယ်လောက် ပြန်မြတ်မလဲ ဆိုတာတွေတွေးကြတယ် … ။
တကယ်တော့ … ဘာလက်ဖွဲ့ပါ … ဘယ်လောက်လက်ဖွဲ့လို့ နည်းသွားတယ်ပြောမယ့်အစား … စေတနာရှိသလို့ ပေးသလောက်နဲ့ ကျေနပ်သင့်တာပါ … သတို့သား သတို့သမီးက အဲ့ဒီလို အကျိုးမြတ်ကိုကြည့်ပြီး မင်္ဂလာပွဲလုပ်ခြင်းကို … ကျွန်မကတော့ တရားဝင်ကာမဆက်ဆံခွင့်ကိုကြော်ငြာပြီး စီးပွားရေးလုပ်ခြင်းလို့ပဲ …. အားမနာတမ်းထောက်ပြလိုက်ချင်ပါတော့တယ် ။
ကျနော်ရောက်ဘူးတဲ့ နယ်တခုမှာတော့ “လက်စားလိုက်တယ်” ဆိုတဲ့ စကားလေးကြားရလို့ မေးမိတယ်။
ကို X man ပြောတာနဲ့ နဲနဲဆင်တယ်။ကျနော်ပြောတာကတော့ အရပ်ဓလေ့ပေါ့နော်။ပါစင်နယ် မဟုတ်ဘူးပေါ့။
လက်ဖွဲ့ကို ကိုယ့်သားသမီး၊ ကိုယ့်အမျိုးတုန်းက ဘယ်လောက် ပေးခဲ့ သလဲဆိုတာ စာအုပ်နဲ့မှတ်ထားပြီး
အဲဒီအတိုင်းပြန်ပေးတဲ့ ဓလေ့ပါ၊ အတိအကျကြီး မဟုတ်ပေမဲ့ အနီးစပ်ဆုံးပြန်ပေးတယ်ပေါ့နော်။
မကြေနပ်စရာလဲမရှိ၊ ကိုယ်ပေးသလောက်သူပြန်ပေး၊ သူပေးခဲ့သလောက်ကိုယ်ပြန်ပေးပေါ့။
အဲ တခုဘဲ ကိုယ့်မှာ မင်္ဂလာဆောင်စရာလူမရှိရင်တော့ “နာ” တယ်ဗျို့။
ကျနော်ကတော့ ဇာတ်ရှုပ်လို့ လက်ဖွဲ့ခြင်းသီးခံပါ ကိုပိုသဘောကျတယ်ဗျာ။
ကိုယ့်အတွက်ဆိုရင်တော့ လက်ဖွဲ့ခြင်းသည်းခံပါ ဆိုတာကိုတော့ အကြိုက်ဆုံးပါ ကိုသစ်မင်းရေ။
ဒါပေမယ့် တခြားလူတွေကရှိသေးတယ်။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းက လူတွေပေါ့။
“သူက ဘာမို့လို့လဲ” ဆိုတဲ့စကားမျိုး အမြင်မျိုးခံရနိုင်တာမို့
နောက်ဆုံးတော့ ရန်မများချင်တာနဲ့ပဲ သူများလုပ်သလိုလိုက်လုပ်ရတော့တာပါပဲ။
မိမိနဲ့ဆိုင်တဲ့ နာရေးလိုဟာမျိုးမှာလဲ အဲဒီသဘောရှိပြန်ရော
သူများကိုငဲ့ပြီး ကြားတတိယလူက လက်ခံပေးတာမျိုး အသာလေးကြည့်နေလိုက်ရတယ်။
လူမှု့ရေးဆိုတာလဲ တကယ်မလွယ်ဘူးပဲနော ……….
နောက်တစ်စောင်က တစ်ခါမှမမြင်ဖူးတဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ရဲ့တူမဆိုတော့
ဟုတ်တယ်စုံစုံရယ် ရင်းတဲ့ လူတွေဆီက ရဖို့ သိပ်မမျှော်လင့်နဲ့ …. ။
ကျွန်မဆို ကျွန်မအစ်ကို မင်္ဂလာဆောင်လို့ သားလေးတောင် ငါးနှစ်ပြည့်ပြီ … အခုထိ မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ပေးဖို့ စိတ်ကူးကိုမရှိဘူး … တစ်ခါတစ်လေသူက စကားနာထိုးတတ်တယ် …
အခုတော့လည်း မင်္ဂလာပွဲအစား … သူ့သားလေးက အန်တီလေးကို ကပ်ပြီး မုန့်ဖိုးတောင်းတာနဲ့ … ပိုကုန်နေရပါပြီ
ဟုတ်ပါ့ Moe Z ရေ။ တခါတလေကျတော့လည်း လက်ဖွဲ့တောင်းတဲ့ဖိတ်စာက ရှိသေးတယ်။ သိလည်းသိပ်မသိ၊ သွားဖို့လည်း မလွယ် (နယ်မှာလုပ်တာမျိုးဆိုရင်) ပေမယ့် ကိုယ့်ဘက်ကတော့ ဝတ္ထရားအရ လက်ဖွဲ့တော့ ပို့ပေးရတယ်။
ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်က complain လုပ်လာလို့ အဲဒါမျိုးတခါမှ မဖြစ်ဖူးတော့ စိတ်မကောာင်းဖြစ်ပြီး ရွာထဲမှာ လာရင်ဖွင့်လိုက်မိတာ နားလည်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်တယ် စုံစုံ ရယ်။
သီတင်းကျွတ်ပြီးတာနဲ့ မင်္ဂလာဖိတ်စာလေးတွေကတော့ ပလူပျံအောင်ရောက်လာတော့တာပါပဲ
နွယ်ပင်ကတော့ ကိုယ်အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းဆိုရင် သူတို့ဘာလိုချင်လဲ ပစ္စည်းလိုချင်လား ငွေသားလားလို့
ပေါ်တင်မေးလိုက်တယ် မင်္ဂလာဦးဆိုတော့ ပစ္စည်းလဲလိုအပ်သလို ငွေသားကိုပဲ လိုချင်တဲ့ သူလည်းရှိတော့
သူငယ်ချင်းတွေကလည်း အားမနာတမ်း လိုချင်တာကိုပြောပါတယ် ။ သိပ်မရင်းနှိးတဲ့ လူဆိုရင်တော့
သူတို့ရဲ့ အခြေအနေကိုကြည့်ပြီး ငွေသားလိုအပ်မယ်လူဆိုလဲ ငွေသားပေါ့ ပစ္စည်းလိုအပ်မယ်လို့ ထင်လောက်တဲ့ သူဆိုရင်လည်း ပစ္စည်းပေါ့ ဒီလိုပဲ ကြည့်ကျက်လက်ဖွဲ့လိုက်တာပါပဲ ……..
မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာတွေကို မုန်းတယ် … (အရှုံးကြီးပဲ ဖြစ်နေလို့ … )
အဲဒေါ့လဲ အခါခါဆောင်၊ ဒါမှမဟုတ် များများယူလိုက်ဗျာ။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အောင်ကြူးရှိတယ်။
ခမ်းခမ်းနားနား ဆောင်လေလေ လက်ဖွဲနည်းနည်း ပေးလေဘဲ ကျွန်တော့် အယူအဆကတော့ hotel ကြီးတွေပေါ် တက်ဆောင်တယ်ဆိုတာ သူတိုတတ်နိုင်လို့ ဆောင်တာဖြစ်တယ် သူတိုအကုန်အကျခံ ထားတာကာမိအောင် လိုက်ပြီလက်ဖွဲ့စရာမလိုဘူးလို့ယူဆတယ်
ဒါပေမယ့် ဘဝ ကို ကိုယ်တိုင်ရုန်းကန်ပြီး တည်ဆောက်ကြရမယ့် မောင်နှံ တွေကိုတော့ အတတ်နိုင်ဆုံးချီးမြှောက်ပါတယ်
နောက်တစ်ခုထည့်စဉ်းစားတာကတော ကိုယ်နဲ ပတ်သက်မှူပါ
ကျနော်သူငယ်ချင်းမ တစ်ယောက်ကတော့ သူကိုယ်တိုင်မင်္ဂလာဆောင်တုန်းက လက်ဖွဲ့စာအုပ်။
သူညီမ သူ့မောင် သူ့သားသမီးတုံးက ဘယ်သူဘယ်လောက်လက်ဖွဲတယ်ဆိုတာကို အကုန်ဖတ် အကုန်မှတ်ပြီး ထားပါသတဲ့။
ဒီပိုစ်ဖတ်တော့ ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မိူင်းရဲ့ အညာမင်္ဂလာဆောင် ဒွေးချိုးကြီးပြန်ဖတ်ချင်လာမိတယ်။
မမ ပို့စ် ဖတ်ပြီးမှ မင်္ဂလာဆောင်ရာသီအတွက် တပ်လှန့်လိုက်သလိုပဲ ရင်တုန်ပန်းတုန် ဖြစ်ရပြီ
မင်္ဂလာဆောင်ကို လက်ဖွဲ့ တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ဆွေမျိုး မိ်တ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း ဘဝတစ်ခုကို တည်ဆောက်ကြတယ် အဲဒီအတွက် ကိုယ်နိုင်တာလေးနဲ့ ဝိုင်းကြ ဝန်းကြတယ် အဲဒီဟာက အခြေခံပဲ အခုတော့ ဈေးတွက်တွေ တွက်လာကြပြီ
မင်္ဂလာဆောင်တာ ဘဝ တစ်ခုရဲ့ အစပဲ ကိုယ်နိုင်တာနဲ့ပဲ စ သင့်တယ် တချို့ လူအထင်ကြီးအောင်လို့ ဖင်မနိုင်ပဲ ပဲကြီးဟင်း စားချင်ကြတယ် အဲဒီ ပဲကြီးဟင်း ကြောင့် ဘဝအစမှာတင် ဦးကျိုးသွားရတဲ့ လူတွေလဲများလာပြီ ကောင်းတာကတော့ ကာယကံရှင်က ကိုယ်နိုင်သလောက်ပဲ ရိုးရိုးသားသားလုပ်
( မဟုတ်တာ လုပ်တာ မဟုတ်တဲ့ အတွက် ဘာမှ ရှက်စရာ မရှိဘူး) လက်ဖွဲ့ ကို ဖြစ်နိ်ု်င်ရင် မယူနဲ့ ယူမယ်ဆိုလဲ သူတို့တတ်နိုင်လို့ ပေးတာကို ကျေးဇူးတင်စွာနဲ့ ယူရုံပဲ ဘာမှ မကျေနပ်ဖြစ်စရာ အကြောင်းမရှိဘူး ကိုယ့် ဆန္ဒနဲ့ ကိုယ်ဆောင်တဲ့ ကိစ္စမှာ လာရတဲ့သူဘက်က အဝတ်အစား၊သွားလာရေး၊ လက်ဖွဲ့၊အချိန် အများကြီး ရင်းပြီးမှ လာရတာ
မဆောင်ရသေးတဲ့ အလားအလာ ရှိသူများကို တစ်ခု အကြံပေးကြည့်ချင်တာ –
ကျွန်တော် ၂၀၀၂ မှာ မင်္ဂလာဆောင်တယ် ၊ သိတဲ့လူတိုင်းကို မဖိတ်တော့ဘဲ အရင်းအနှီးဆုံး လူ ၂၀ဝ လောက်ပဲ ဖိတ်တယ် ကိုယ်နိုင်တာလေးနဲ့ ကျွေးမွေးဧည့်ခံတယ် ဖိတ်စာမှာ “ မေတ္တာဖြင့် လက်ဖွဲ့ခြင်းသည်းခံပါ ” ဆိုတာလေး ထည့်ဖြစ်တယ် နောက်ပိုင်း မင်္ဂလာဆောင်သွားဘို့ လက်ဖွဲ့ကိစ္စ ခေါင်းရှုတ်ရတိုင်း အခုပို့စ် လို ကိစ္စမျိုး ကြားရတိုင်း ကိုယ့်လုပ်ခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်လေး အတွက် ကျေနပ်မိ ကြည်နှုးမိတယ် ( လုပ်ဘူးတာလေး ပြောပြရုံနော် ဒါမှ အမှန်လို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါ )
ကွန်ပလိမ်းလုပ်တဲ့ မမ ရဲ့ သူငယ်ချင်းကိုတော့ တွက်တက်လိုက်တာလို့ပဲ ဖြေတွေး တွေးပေးလိုက်ပါ
အဟမ်း.. အန်တီ မမ ရွာထဲက ကလေးတွေ မင်ဂါချောင်ရင် ဘယ်လောက် လက်ဖွဲ့မှာလဲ.. ဟိဟိ..
ဖိတ်စာ ပွဲစား လုပ်မလို့.. ဒါလည်း ခေတ်ပေါ် စီးပွားရေး တစ်ခု ဖြစ်မလားလို့ အခု ဖတ်ရင်းနဲ့တွေးမိတယ်။
သဂျီးပြောတဲ့ ပစ္စည်းတစ်မျိုးတည်းကို လူပေါင်းများစွာက လက်ဖွဲ့တာကတော့ ဘာမှ လုပ်လို့ မရဘူး အသိဆိုင်ရှိရင် ရောင်းခိုင်း သို့မဟုတ် လျော့ဈေးနဲ့ ရောင်း… သို့မဟုတ် ပိုက်ဆံ အရေးတကြီး မလိုအပ်ဘူး ဆိုရင် အိမ်မှာပဲ သိမ်းထား ဆူး အသိတစ်ယောက်ဆို မင်္ဂလာဆောင်တာ ၆နှစ် ရနှစ် ရှိနေပြီ မနှစ်ကအထိ မင်္ဂလာဆောင် လာတိုင်း သူ့ ပါဆယ် ထုတ်တွေ လက်ဖွဲ့ ပြန်ပေးနေတဲ့ အကြောင်း ပြောတာ ကြားမိတယ်။ ကိုယ်တိုင် ရထားတဲ့ လက်ဖွဲ့ကို ကိုယ်တိုင် အသုံးမလိုတဲ့အခါ သူများ မင်္ဂလာဆောင်ကို သွားတဲ့အခါ ပါဆယ်ပြန်ထုတ် နာမည်ကပ်ပြီး ယူသွားတော့ တမျိုးတော့ စရိတ်သက်သာစေတယ်။ ဒီခေတ်က မင်္ဂလာဆောင်မှ လက်ဆောင်ပေးရတာ မဟုတ်ဘူး။ အိမ်သစ်တက် ဆိုင်သစ်ဖွင့် ရုံးခန်းသစ်ဖွင့် စက်ရုံနှစ်ပတ်လည် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည် ကလေးကင်ပွန်းတပ် ကလေးမွေး မွေးနေ့ စသဖြင့် စသဖြင့်.. ဖိတ်စာနဲ့ လာတဲ့ ပွဲတိုင်း လက်ဆောင်ပေးနေကြတယ်။ သူများပေးပြီး ကိုယ်မပါသွားတော့ မျက်နှာတော့ ပူစရာလို ခံစားရပြန်ကော။
နာရေး ဆိုလည်း ဒီလိုပဲ လူသေတယ် ဆိုတာနဲ့ ပိုက်ဆံ မပေးချင်ကြတော့ သင်္ကန်းပေးကြတယ်။ ငြင်းလို့ မကောင်းဘူးလေ.. သေသူအတွက် ပြန်လှူခိုင်းတာ ဆိုတော့ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ လက်ခံပေးရတာပေါ့။ အဖေ သေတုန်းကဆို သင်္ကန်းတွေ အားကြီးပဲ ရတာ တော်တော် လှူယူရတယ်။ နောက်ပိုင်းမှ သိတယ် နာရေး လက်ဆောင်ပေးတဲ့ သင်္ကန်းတွေက များသော အားဖြင့် သက်သာတဲ့ သင်္ကန်းကိုသာ ဝယ်ကြတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။ အမှန်တော့ ပိုက်ဆံလည်း မလိုဘူး သင်္ကန်းလည်း မလိုဘူး ဘာမှမလိုဘူး လူတွေက တခုခုမှ မပေးရရင် တာဝန်မကျေဘူး မသိတတ်ဘူး ဆိုတဲ့ အတွေးအမြင်တွေ အထင်ခံရမှာစိုးလို့ ပကာသန အတွက် လိုက်ပေးကြတာ.. ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆို ပိုကောင်းတာတောင် ဝယ်လှူဖြစ်အုန်းမယ်။
တခါတုန်းက အသိ တယောက် ဆိုင်သစ်ဖွင့်ပွဲသွား သူတို့ဆီမှာ လက်ဆောင်ရထားတဲ့ ကျောက်ပန်းချီတွေ အားကြီးပဲ နဲတာမဟုတ်ဘူး။ ချိတ်မယ်ဆိုရင် ပြခန်းတောင် လုပ်လို့ ရတယ်။ ပြန်ရောင်းတော့ မရောင်းပါဘူး.. သေချာ သိမ်းထားပြီး အလှူမင်္ဂလာ ဖိတ်စာရတိုင်း လိုက်ပေးတော့တာပဲ.. ဒါလည်း တမျိုးတော့ သက်သာသွားစေတယ်။ ကျောက်ပန်းချီ တွေကလည်း အထိုက်အလျှောက်တော့ အဖိုးတော့ တန်ပါတယ်။ လက်ဆောင်ပေးတော့ မျက်နှာပန်းလှတယ်။
ရွာထဲက အပျိုလူပျိုတွေတော့ မမရဲ့ပိုစ်ကိုဖတ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ကြပေတော့.
ကမ္ဘာ ကမ္ဘာ အဝေး…. ဝေးပြီဝေးပြီ ဝေးပြီ…
အဲဒီလို တစ်ခါမှ မတွက်ခဲ့မိဘူး၊ ခင်ရင် များများဖွဲ့ပြီး သိပ်မခင်ရင် ဘယ်နေရာဆောင်ဆောင် တော်ရုံလေးဘဲဖွဲ့လိုက်မိတယ်။
ဆင်းရဲပြီး ခင်ရင်တော့ ပိုဖွဲ့တယ်။
ပိုက်ဆံဖွဲ့တာ နည်းနေမှာ အားနာတယ်။သူတို့ကို ဈေးဖြတ်မိသလိုဘဲ။ပစ္စည်းဆိုတော့ တန်ဖိုးမသိတသိပေါ့။
သိပ်ခင်လို့သိန်းဂဏန်း ဆိုရင်တော့ ပိုက်ဆံဖွဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့် သေချာစဉ်းစားကြည့်တော့လည်း အဲဒါကမှ သူတို့အတွက် ပိုကောင်းနေသလိုလို။
စီးပွားရေး အသိုင်းအဝိုင်းကျတော့ အချိုးကျပါလိုက်ရင် အုန်းစားသက်သာတယ်။
စုပေါင်းရင် သူတို့လည်း ပစ္စည်းကောင်းကောင်းရတယ်။
ဘီလူးကြီးကတော့ ပိုင်ပါပေ့။ မောင်ပေကို ချည်ပြီးတုပ်ပြီးမှ ဖိတ်စာပို့တာကိုး။ မောင်ပေရဲ့ အပြန်အလှန်ပေ့ါ ညှင်းညှင်း ဆိုတာကိုလည်း ဆက်ဖတ်လိုက်ဦးနော်။
etone ရေ- ကိုပေါက်နဲ့ ကွဲပြားသွားအောင် မောင်ပေါက်လို့ ပြောလိုက်တာပါ။ etone ရဲ့ ဖိတ်စာဆိုရင်တော့ အုန်းစားစရာမလိုလို့ ဖိတ်သာဖိတ်လိုက်ပါလို့
thit min နဲ့ ကိုကိုအောင်တို့ရဲ့ ဖိတ်စာမျိုးဆိုရင်လည်း welcome ပါလို့။
နွယ်ပင်ရေ- များသောအားဖြင့်တော့ လွယ်လွယ်ကူကူပဲ ပြီးသွားတာပါပဲ။ ခုတခေါက်ကျမှ
wei wei လည်း အမြတ်ရပါစေ။
စေတနာ့ဝန်ထမ်း အောင်ကြူးလည်း စေတနာ့ဝန်ကို စိတ်ရှိတဲ့အတိုင်း ထမ်းနိုင်ပါစေ။
နိုင်ကြီးရဲ့ နည်းလမ်း တွက်နည်းကလည်း အတုယူစရာပဲ။ သဘာဝကျလို့ သဘောကျတယ်။
ကိုပေါက်ပြောတဲ့ ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မိူင်းရဲ့ အညာမင်္ဂလာဆောင် ဒွေးချိုးကြီးကို ကျမလည်းဖတ်ချင်မိပါတယ်။ တတ်နိုင်ရင် ရွာထဲပြန်တင်ပေးပါဦးနော်။ ကိုပေါက်ပြောမှပဲ ရွာထဲက အပျိုလူပျိုတွေ နောက်ဆုတ်သွားလို့ သဂျီးရဲ့ တားဂက် (မြန်မြန်ယူ၊ များများမွေးကြ) ကို နှောင့်ယှက်ရာကျလို့ အရေးယူခံနေရဦးမယ်။
nozomi ရဲ့(ကိုယ့်လုပ်ခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်လေး အတွက် ကျေနပ်မိ ကြည်နှုးမိတယ်) ဆိုတာလေးကလည်း ကုသိုလ်တမျိုးပဲ။ nozomi ပြောသလိုပဲ ဖြေတွေးတွေးလိုက်ပြီး စိတ်ထဲလည်း ရှင်းသွားပါပြီ။
ဆူးရေ- ရွာထဲက ကလေးတွေအတွက်ကတော့ ရှယ်ပေ့ါ။ သဂျီးက လက်ဖွဲ့မယ်လို့ ပြောထားဘူးတာ မှတ်ထားတယ်။ ကိုယ်လည်း သူ့ဆီကရမယ့်ပွိုင့်တွေကို မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့အနေနဲ့ လွှဲပေးမယ်။
Yin Nyine Nway ရေ လက်ဖက်ကောင်းစားချင်ရင် ပလောင်တောင်တက်နှေးရမယ်ဆိုတဲ့ စကားပုံလေး ရှိတယ် မဟုတ်လား။ နောက်ကျလေ လက်ဖွဲ့ပိုရလေ ဖြစ်မှာပေ့ါ။ (တနှစ်ထက်တနှစ် လက်ဖွဲ့ရတဲ့နှုန်းက မြင့်လာသလားလို့) ;)
padonmar ပြောသလို စုပေါင်းလက်ဖွဲ့လိုက်တာလည်း ကောင်းတာပဲ။ တစ်ယောက်စီက ရမယ့် ဘုစုခရု ပစ္စည်းမျိုးစုံအစား စုပေါင်းပြီး ကြီးကြီးမားမား အသုံးတည့်မယ့် ပစ္စည်းဆိုရင် ပိုကောင်းတာပေ့ါ။